Khulisa i-spathiphyllum. Ukunakekela Guest Guest
I-spathiphyllum isitshalo somndeni we-Aroid, okhula endaweni engaphansi kwehlathi elisemanzi . Indawo yayo iningi kakhulu: ihlanganisa amahlathi aseFilipi Islands, eBrazil, Venezuela, Guyana naseColombia.
Inhle, inhle, ingenakuzithoba, i-spathiphyllum inqobe ngokushesha indawo yabasimi bezwe. Futhi uma eminyakeni engaba ngu-10 eyedlule kwakuyisitshalo esingavamile okwakubhekwa njengesipho esamukelekile, manje cishe wonke amakhaya noma ihhovisi, kanye ne-fern, i-dracaena kanye ne-pelargonium engashintshi, iyanda i-spathiphyllum.
Ukunakekelwa kulula, ukukhiqiza akudingi izinkinga eziningi, ngakho-ke lobu buhle obuhle ezindlini zethu buqalile. Kodwa okwamanje ekutshalweni kwe-spathiphyllum kunezimfihlo, ulwazi olukuvumela ukuba uthole isitshalo esimangalisayo esiqhakaza cishe unyaka wonke. Cabanga ngalokho abayikho.
Lesi sitshalo sibekezelela i-penumbra encane, kodwa sithanda ukukhanya okukhanyayo ngokuvikelwa elangeni eliqondile. Uma amaqabunga elula, aphendukile, izimbali ziba buthaka, zingavamile futhi zifushane, okusho ukuthi ukukhanya akwanele.
I-substrat kufanele ikhethwe ivulekile futhi i-airy, kufanele "iphefumule" futhi ivumele ukungena. Lokhu kubalulekile kubo bonke abamele izitshalo ezishisayo, akuyona into ehlukile kanye ne-spathiphyllum. Ukunakekelwa, ngisho nangokwedlulele kakhulu, ngeke kusebenze uma lesi sitshalo sitshalwe enhlabathini enamandla noma enobumba enomhlabathi ompofu. Kungenzeka ukwakha i-substrate engxenyeni yezingxenye ezilinganayo ze-sand-grained river sand, i-humus, i-peat, i-turf kanye neqabunga lomhlaba ngokungeziwe kwama-crushed charcoal and crumb crumbs.
Uma ushintshela i-spathiphyllum, kudingeka ukhethe ngokucophelela i-vase. Kuvame ukuthi kwenzeka ukuthi isitshalo, esisebusweni sezokuthutha kanye nesibindi sepulasitiki esiseduze, siqhuma njalo, futhi sitshalwe ngokucophelela ngumnikazi singena emgodini ogcwele ngenhlabathi entsha, iphela ukuqhuma, futhi isikhathi eside - unyaka noma ngaphezulu. Umlimi wemifino uyinkimbinkimbi, kodwa nokho lokhu kuyimvelo, ngoba izimbali zalesi siko zenzeka kuphela uma izimpande zikhula ngokuphelele umhlabathi. Lokhu kumele kukhunjulwe ngokukhula kwe-spathiphyllum.
Ukunakekela lesi sitshalo, ngaphezu kwalokho, kuhilela ukugcoba njalo kwenhlabathi nomoya. Ukunisela ngesikhathi sesikhathi sokutshala kufanele kube njalo futhi kukhulu, ekwindla nasebusika kuncishisiwe, uma ngabe okuqukethwe kupholile futhi akukho ukukhanya okungeziwe. Uma lesi sitshalo sitholakala ekamelweni elifudumele futhi lilula, umbuso omanzi uhlala ungaguquki. Kunoma yikuphi, phakathi kokuchelela kuyadingeka ukuba umise kancane ungqimba ophezulu wenhlabathi. Nakuba i-spathiphyllum nomdabu emazweni ashisayo, kuye, ukumisa (okufushane, okuyiqiniso) akuyona into ebulalayo njengokuchichima. Ngomswakama okweqile kuboniswe amathiphu omnyama omnyama amaqabunga (okungabonakali namathiphu omile, okusho umoya omile!).
Umswakama ophakanyisiwe emoyeni uthandwa yiwo wonke ama-aroid, kuhlanganise ne-spathiphyllum. Ukunakekela kufanele kufake ukufakaza okuvamile. Le nqubo ngeke ivuselele kuphela umqhele, kodwa futhi iyoba ukuvikela okuhle izibungu zesicabucabu, ama- scabi nama-aphid.
Isitshalo esilungisiwe kahle asivamile ukuhlaselwa ekuhlaselweni kwezinambuzane, ngoba ihlukaniswa ukuqina okukhulu. Ama-fungi, amagciwane nama-bacteria ayithinti neze i-spathiphyllum. Izifo zalesi siko zivamise ukuhlanganiswa namaphutha ekunakekeleni - lokhu kungabikho ukukhanya (amaqabunga akhishwa, ama-stop stops) noma okweqile (ukushisa kwelanga), ukuchichima (amathiphu amnyama amaqabunga) noma ukomisa isikhathi eside (ukulahlekelwa kwe-turgor, amaqabunga aphikisayo), i-substrate ekhethiwe Ukukhula kancane noma ukumisa kwayo) noma ukuntuleka kwezakhi (amaqabunga aphuzi futhi amile, izimbali azikwenzeka).
Inkinga evame kakhulu ukuphuza ngokweqile ngemuva kwenhlabathi enzima nge-aeration embi kanye namanzi angaphansi kwamanzi. Kulesi simo, inhlabathi iyaba mnandi, izimpande ziqala ukubola, amaqabunga aphilile futhi awa, amathiphu abo aphendulela abamnyama - kukhona zonke izimpawu zamanzi. Lesi sitshalo sidinga ukunakekelwa okukhethekile. Ukuze uthole i-spathiphyllum kuyadingeka ukuthi wenze ngokushesha, kungenjalo kungase kulahleke. Inhlabathi endala isusiwe, izimpande zihlanza, uma zikhona izindawo ezibola, ziyakunqunywa. Khona-ke isitshalo esithintekile sitshalwe endaweni encane ye-substrate futhi sinisela kakhulu.
Njalo ngenyanga ngesikhatsi semifino kunesidingo sokondla i-spathiphyllum ne-fertilizer yomanyolo. Uma ungavumeli amaphutha ekunakekelweni futhi ugcine imithetho elula ye-agrotechnics, lesi sitshalo sizokhanyeka unyaka wonke namahlamvu ayo agqamile ehlotshiswe izikhumba ezimhlophe zeqhwa zezimbali ezingavamile.
I-Urals Filling - i-apula isihlahla senjongo yonke
"Ukuvimbela" engadini: imiyalo yokusetshenziswa, ukubuyekezwa nokubunjwa
Umsedari waseLebanoni: incazelo, ukusatshalaliswa, ukusetshenziswa nokulima ekhaya
I-ros house house: izinhlobo nolwazi oluthakazelisayo ngabo
Ophihliza iqhwa "Yamal": Cruise ukuze North Pole
Ikhishi for emakhishini ewumngcingo: sokuba uNkulunkulu abonise umcabango
Ukuphulukisa izindawo zeparafini. I-paraffin mask ebusweni
Ubukhulu yoboya amasokisi izingane. Indlela ukukhetha accessory kwesokudla efudumele? Care Tips
Udweba kanjani isithombe ipensela
Southern Africa: uhlu inhlokodolobha, amaqiniso ezithakazelisayo
Lifan Solano: ukubuyekezwa kanye izici
Indlela yokusebenzisa AVZ? Indlela yokusebenzisa-anti-virus Umbuso AVZ?
Indlela ukuqeda isicanucanu ngesikhathi sokukhulelwa. Amathiphu namacebo
Ukuqhuma kwendiza eGibhithe ngoMeyi 2016: kubangela, uphenyo, oshonile